Lacag loo qorsheeyey meelaynta carruurta keligood yimi - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kabo yaala daaradda hooy lagu hayo dhallaanka kali socodka ah. sawir: Tomas Oneborg/SvD/TT
Lacag loo qorsheeyey meelaynta carruurta keligood yimi
La daabacay fredag 11 augusti 2017 kl 10.41
Degmada Stockholm ayaa 10 milyan ka heshay xukumada dhexe is ay meel u dejiso dhalinyarada keligood yimaada ee buuxiya 18 jir.
Lagactan ayaa ka mid 159 milyan oo xukumadda dhexe u qorshaysay degmooyinka waddanka in ay u isticmaalaan caawinta dhalaanka buuxiya 18 sano.
- Lacagtan waxa ay suuragelinaysaa in dhallaankan lagu casuumo in ay halkan joogan. Carruurta halkan la qabsaday, waxbarashada bilaabay oo amaan ku dareemayaa ayaa loo suuragelin doonaa in ay degmada sii joogaan ayey sheegtay Åsa Lindhagen oo degmada Stockholm u hadashay.
Carruurta keligood yimaada waxa masuul ka noqda degmooyinka, balse marka ay 18 sano buuxiyaan waxa masuuliyadooda la wareega laanta socdaalka oo inta badan ku khasabta in ay ka guuraan meeshii ay la qabsadeen ee ay iskuulada ka bilaabeen. Arrintan ayaa dhalisay in xukummada dhexe u qorshayso lacag degdemooyinka si ay dhalinyara 18 jir gaadha ugu ogolaadaan in ay degmada sii degenaadaan.
Stockholm waxa hada jooga 400 oo carruur keli socod ah oo sannadkan qaangaadhaysa oo ay tahay in degmada Stockholm meel ay degaan u soo hesho.
- Waxa loo isticmaali karaa in la helo dhowr xal. Waxay noqon karaan in la helo guryo ku meel gaadha ah, in ururada ay keenaan xal, in dadka lagu dardargeliyo in ay gacan ka geestaan xalinta arrintan, iyo in dadka haya carruurta la siiyo dhaqaale dheeraad ah si ay u sii haayn karaan caruurta gaadha 18 jir.